केशाहरूको लागि कपालको खुट्टाको अनुभव कस्तो छ - प्राविधिक सूचना - शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
केशाहरूको खुट्टाको खुट्टा हुनु कस्तो प्रकारको अनुभव हो
समय: 2021-04-09 हिट्स: 636
केही नेटिजेन्सहरूले ठट्टा गरे: किनकि उनीहरूको झाडी खुट्टाको कपालको कारण, लामखुट्टेहरू पनि भित्र आउन सक्दैनन्; यदि केटाले खुट्टाको कपालको बाक्लो तह देख्नुभयो भने, ड्रिल गर्न ठाउँ पाउँदा उनी साँच्चिकै लाज मान्छिन्।
खुट्टाको कपाललाई "सामना गर्न" केही केटीहरूले साधारण र असभ्य कपाल हटाउने विधिहरू अपनाउँछन्: चक्कुको साथ सिधा स्क्रैप गर्नुहोस्, तर यसले मूल कारणबाट नभई लक्षणहरूलाई निको पार्दछ। स्क्र्यापि ofको गति कहिले पनि खुट्टाको कपालको विकासको साथ समात्ने छैन, र यो दुर्घटनावश कोरिन सक्छ; केही केटीहरूले कपाल हटाउने क्रीम प्रयोग गर्दछन्। यहाँ म सबैलाई सम्झाउँछु कि कपाल हटाउने क्रीमको सिद्धान्त केशको संरचना विघटन गर्न रसायनको प्रयोग गर्नु हो, जुन छोटो समयको लागि रहन्छ र एलर्जीको कारण हुन सक्छ। केही व्यक्तिले चिम प्रयोग गर्न को लागी एक एक गरी बाहिर निकाल्न वा टेप, आदि संग टाँसिदिए।
आज, म हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय लेजर कपाल हटाउने बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। लेजर कपाल हटाउने चुनिंदा फोटोथर्मल कार्यमा आधारित छ। यसले मेलानिनलाई लक्षित र as्गको आधारको रूपमा ऊर्जा शोषण गर्न, कपालको फोलिकुल नष्ट गर्न र कपाल पुनरुत्थान रोक्न प्रयोग गर्दछ।
परम्परागत सेभिंग, ब्यासवैक्स, कपाल हटाउने क्रीम, इत्यादिसँग तुलना गर्दा, लेजर कपाल हटाउने चिरस्थायी कपाल हटाउने उद्देश्य हासिल गर्न सक्दछ, तर किनभने सामान्य मानव कपालको 30०% निष्क्रिय अवधिमा हुन्छ, लेजरले मूल रूपमा कुनै प्रभाव पार्दैन। सुस्त अवधिमा कपाल, त्यसैले समय अवधि पछि, सुस्त अवधिमा कपाल फेरि बढ्नेछ।
मैले तपाईंलाई सम्झाउनु पर्छ कि सबैजना लेजर कपाल हटाउनका लागि उपयुक्त छैनन्। यसलाई निम्न परिस्थितिहरूमा नगर्न सिफारिस गरिन्छ:
१. मानिस जो धेरै जवान छ;
२. गर्भवती महिलाहरू;
Skin. छाला जुन हालसाल सूर्यको संपर्कमा आएको छ वा ट्यान गरिएको छ;
People. मानिस जसले भर्खर प्रकाश-संवेदनशील औषधि प्रयोग गरेका छन् र फोटोलर्जिक प्रतिक्रियाहरू छन्;
थप रूपमा, लेजर कपाल हटाउने उपचार अघि, एपिडर्मल क्षतिबाट बच्न कपाल हटाउनको लागि प्क्रिंग र वेक्सिंग विधिहरू प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
अघिल्लो: ब्यूटी सैलुनमा ती पेशेवर कपाल हटाउने उपकरणहरूको ईन्भेन्टरी गर्दै
अर्को: अत्यधिक शरीर कपाल प्राय: ती कारणहरूले गर्दा हो